iCloud ingadai yakabiwa kubva kuUbuntu Linux | Linux Vakapindwa muropa
NBC uye Nhasi Ratidza kushandisa Ubuntu kudzokorora iCloud kubira
Iko kunetseka kwakakurumbira kwakabvumidza maakaundi maakaundi ICloud uye kuba mapikicha asina kupfeka evakakurumbira hakuna kumboonekwa nemunhu wese. Apple yataura kuti haisi mhosva yayo, kuti yanga isingaiti nekuda kwechikanganiso chayo (kujekesa kushoropodzwa kwese kunogamuchirwa, asi mhedzisiro yacho inoita kunge yakapesana, zvachose passivism pachikamu cheapuro kambani).
Kunyange zvakadaro, mukuratidzira kwekudzikama, apuro iwe waisa yekuwedzera "chengetedzo sisitimu" kune yako iCloud gore. Kubva ikozvino zvichienda mberi, pavanowana iyo account, email ichatumirwa kuzivisa kuti mumwe munhu awana iCloud. Runyararo rwepfungwa, kuti mumwe munhu arambe achiwana, asi zvirinani kuti iwe uzive ...
Zvakanaka ikozvino NBC uye Nhasi Ratidza Ivo vakashandisa Ubuntu kuratidza kuti pirate (kwete mubiridzi, seizvo vese vezvenhau vanowanzo taura) vakawana mifananidzo yevakakurumbira vachishandisa zvakanakira zvinopihwa neLinux. Asi izvi zvinogona kupa zano rakashata revashandisi veLinux kuti kubva pano ini ndoda kudzivirira, havazi vese vane mazano akaipa uye vakazvipira kuve matsotsi e-cyber. Sezvo ini ndisingatendi kuti vanhu vese vane mapanga mapfumo ...
Zvinotaridza sekunge anogona kunge akashandisa mufananidzo we Ubuntu 12.04 Zvekurwiswa, asi apa ndipo panotora nyaya, mubati anoita kunge asiri wekushandisa weLinux. Uye izvi zvinopa mapoinzi mukuda kweLinux, sezvo pirate yakashandiswa Mac Os X uye neVirtualBox akafananidza Ubuntu kurwisa iCloud nayo. Uye vakati izvo zvinowedzerwa, sezvo vadziviriri vakasimba veMac OS X uye MacTaliban, vanofanirwa kunzwisisa simba reLinux kamwechete uye zvachose. Kana OS X yakanaka kwazvo, sei vasina kuishandisa pakurwisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » NBC uye Nhasi Ratidza kushandisa Ubuntu kudzokorora iCloud kubira
Linux inzira yakanaka kwazvo, ndinoshandisa iyo kwemakore mazhinji, Ubuntu naFedora
Edzai kumhanya kwe network yako kubatana kubva kune iyo terminal
Maitiro ekusetazve iyo Raspberry Pi password